Ku Saabsan Kulankaga Dambe | Martech Zone
Ku Saabsan Kulankaaga Dambe
Arbacada, February 17, 2010 Axad, Juun 28, 2015 Douglas Karr
Waxaan inbadan ka fikirayay shirar dhawaan dhacay. Qoraalka Seth on dhacdooyinka shirkadda sanadlaha ah igu dhiirrigeliyay inaan bilaabo sameynta qoraalkan. Qof ahaan ganacsi hal shaqaale ah, waa inaan si taxaddar leh uga taxaddaraa inta kulan ee aan xaadiro ee aan dakhli soo saarin.
Maalin kasta, waxaa laygu casuumaa kulan - caadi ahaan koob bun ah ama qado ah. Waqtiga intiisa badan, waa xiriirro xirfadeed ama xitaa hogaamiya sidaas darteed waa soo saar aan dakhli lahayn maanta, laakiin berri waxay u horseedi kartaa wax. Kulamadaani waa kuwa xiiso leh… sida caadiga ah fikirka ama istiraatiijiyad ku saabsan shirkad, suuqgeynta, ama tikniyoolajiyad soo kordheysa.
Taasi way ka duwan tahay sidii aan uga shaqeyn jiray shirkado waaweyn oo maalin walba shirar qaban jiray. Kulamada shirkaduhu waa qaali, waxsoosaarka wax soo saarka, waxayna badanaa yihiin waqti lumis buuxda. Waa kuwan nooca shirarka ee dhaawaca dhaqanka dhaqanka:
Kulamada la qabtay si loo helo wax la isku raacsan yahay. Fursadaha ayaa ah inaad shaqaaleeysay qof mas'uul ka ah inuu shaqada qabto. Haddii aad qabanayso kulan aad go'aan ugu gaadhayso iyaga… ama ka sii daran… inaad go’aanka ka qaadatid iyaga, qalad baad ku jirtaa. Haddii aadan ku aaminin qofka inuu qabto shaqada, ka dib shaqada ka cayri.
Kulamada lagu faafiyo is afgarad. Tani waxyar ayey ka duwan tahay… sida caadiga ah qofka go'aanka gaara. Isaga ama iyadu kuma kalsoona go'aankooda waxayna ka baqayaan waxyeellooyinka. Markay kulan yeeshaan isla markaana ay kooxda ka helaan fikrad, waxay isku dayayaan inay faafiyaan canaanta isla markaana yareeyaan la xisaabtankooda.
Kulamada lagu yeelanayo shirarka. Ma jiraan wax ka xun sida loo carqaladeeyo maalinta qof maalinle, toddobaadle, ama kulan bille ah oo ajende aan jirin oo aan waxna dhicin. Kulamadani waa kuwo qaali ku ah shirkad, inta badanna ku kaca kumanaan kun oo doolar.
Kulan kastaa waa inuu lahaadaa hadaf aan si madax banaan loo fulin karin… laga yaabee inuu maskax fidiyo, is gaadhsiiyo fariin muhiim ah, ama inuu burburiyo mashruuc iyo hawlo u xil saaro Shirkad kastaa waa inay sameysaa sharci - kulan bilaa hadaf iyo ajandaha waa inuu diidaa martiqaadka.
Sannado badan ka hor, waxaan soo maray fasal hoggaamineed halkaas oo ay ku baray sida loo yeesho shirarka. Taasi waxay u muuqan kartaa wax lagu qoslo, laakiin kharashka kulamada ururada waaweyn waa muhiim. Adiga oo wanaajinaya kulan kasta, waxaad keydisay lacag, waqti, waxaadna dhistay kooxahaaga intii aad dhaawici lahayd.
Kulamada kooxdu waxay lahaayeen hogaamiye, a karraa (in la qoro), a waqti-ilaaliye (si loo hubiyo in kulanku waqtigiisa ku dhacay), iyo a waardiye-ilaaliye (in mawduuca lagu sii hayo). Waqtiga-ilaaliyaha iyo irid-hayaha ayaa beddelay kulan kasta oo wuxuu lahaa awood buuxda oo uu ku beddelo mowduucyada ama joojiyo fadhi.
10-kii daqiiqo ee ugu dambeeyay ama wixii ka dambeeyay kulan kasta waxaa loo isticmaalay in lagu soo saaro a Qorshe-hawleed. Qorshaha Waxqabadka wuxuu lahaa 3 tiir - Yuu yahay, Waa maxay, iyo Goorma. Ficil kasta waxaa lagu qeexay cida qabanaysa shaqada, maxay ahaayeen waxyaalaha la soo iibsan karo ee la cabiray, iyo goorta ay ku dhaafi doonaan. Waxay ahayd shaqada hoggaamiyeyaasha inay dadka kula xisaabtamaan waxyaabaha la isku afgartay ee la isla gartay. Anagoo diyaarinay sharciyadan shirarka, waxaan awood u yeelanay inaan ka bedelno shirarka oo aan carqalad ku noqono waxaana bilownay inaan ka dhigno kuwo wax soo saar leh.
Waxaan kugula tartami lahaa inaad ka fikirto kulan kasta oo aad yeelaneyso, inuu dakhli abuurayo, inuu wax soo saar leeyahay iyo sidaad u maareynaysaba. Waan adeegsadaa Isku darka jadwalka shirarkayga oo badiyaa waxaan isweydiiyaa imisa kulan oo aan dhab ahaan lahaan lahaa haddii ay ahayd inaad lacag ku bixiso kaarka deynta si aad u ballansatid! Haddii ay ahayd inaad ka bixisid kulankaaga dambe mushaharkaaga, weli ma heleysaa?
Tags: isku dar ahkulansababaha kulamadajadwalka
Sifee Subdomain-yada Google Analytics
Febraayo 18, 2010 saacadu markay tahay 6: 38 AM
Doug, waxaan jeclaan lahaa inaan jadwal u sameeyo kulan si aan ugala hadlo tan inbadan. 🙂
Mar baan maqlay majaajiliiste oo dhahaya shirarku waxay si dhakhso leh ugu socon doonaan shirkadaha America haddii qabanqaabiyaha uu kaliya bilaabay kulanka asagoo waydiinaya qof walba inuu gacantiisa taago haddii ay wali ka shaqeynayaan wax kasta oo dhib ah oo ay ku shaqeynayeen shalay.
Feb 20, 2010 markay ahayd 12:26 PM
Qoraal Cajiib ah! Falsafada "kullamada oo dhan waa ikhtiyaari" runti waa tilmaan bixiyaha ROWE, oo shirkadaydu ku raaxeysaneysay dhowr sano hadda. In badan oo naga mid ah ayaa qiimeyna waxyaalaha qaldan, sida "waqtiga wajiga", ama buuxinta kursi goor hore. Kulamada iyo waqtiga wajiga waa kuwo aad u wanaagsan qiimena ku leh macnaha saxda ah laakiin waa in aynaan u oggolaan waxyaabahan in ay nasiiyaan dhalanteedka wax soo saar marka aysan macno samaynayn.